🥇 ▷ Huawei Mate 20 Pro Tani waxay umuuqataa mid aan xad lahayn inay run tahay ✅
Huawei Mate 20 Pro Tani waxay umuuqataa mid aan xad lahayn inay run tahay
Huawei Mate 20 Pro wuxuu noqon karaa aalad al kor ee qaybta casriga, ugu yaraan marka loo eego buuqa. Mid ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ayaa bixiyay macluumaad iyo amuuqaal taas oo durbadiiba diirisay quluubta isticmaaleyaal badan, xitaa haddii xaqiiqadeeda ay tahay in la caddeeyo.
Sawirka waxaad si buuxda uga dhex arki kartaa qeybta hore ee waxa ay noqon laheyd Mate 20 Pro: xiriirka shaashadda-jirka waxay umuuqataa xad-dhaaf ah, maaddaama bandhiggu uu ku fadhiyo ficil ahaan dusha oo dhan marka laga reebo laba aad u yar xarkaha sawirka kor iyo hoos. Dhinacyada dhaadheer waxay leeyihiin xoogaa qalooca, iyada oo aysan jirin raad ka mid ah dareemayaasha iftiinka ama u-dhowaanta ama kamarad hore.
Marka la soo koobo, waxay noqon laheyd qalab la’aan, laakiin laga yaabee in lagu qalabeeyay qalabka sawirka faraha iyo kamarad hore Soo-saar Qaabka Vivo NEX, xitaa haddii ay noqon laheyd labo wax soo saar oo xasaasi ah oo aan lagu taageerin xaqiijinta kale ee hore.
Jirka hoostiisa waa inuu jiraa SoC Kirin 980, oo ay weheliso 8 GB Ram oo ay taageerayaan teknolojiyad GPU Turbo. Sidoo kale moodelkan waxaa lahaan lahaa kamarad saddex-geesood ah mar hore lagu arkay Huawei P20 Pro, oo leh mid ka mid ah dareemayaasha ka soo jeeda ben 42 Xildhibaan.
AKHRISO: Huawei P20 Pro, dib u eegista
Imaatinka xaddiga Mate 20 ayaa la filayaa deyrta soo socota, laakiin mala-awaal horeba waa macquul liiska liiska, taas oo noqon karta hareeraha 5,000 Yuan (qiyaastii € 628) oo loogu talagalay noocyadaan kala duwan ee ‘Pro’.
Waxaan ku celinaynaa inisku halaynta isha uma muuqato mid aad u sarreysa, sidaa darteed dhammaan macluumaadka la soo gudbiyey waa in si taxaddar leh loo qaataa. Sida la yiri, nashqad noocan oo kale ah wey ka xad badnaan kartaa xitaa shirkad sida Huawei, sidaa darteed waa inaan dhowrnaa toddobaadyo badan ka hor intaanan si fiican u fahmin waxa Mate 20 Pro-ga cusub uu ahaan doono.
Via: GizmochinaXigasho: CNMO